Thenga i-Mibolerone powder (3704-9-4) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Trenbolone powder Series / IMibolerone powder (3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. iindidi: I-Trenbolone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Mibolerone powder (i-3704-9-4), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Mibolerone powder Abalinganiswa basisiseko
Amagama eKhemikhali: i-dimethylnortestosterone, i-Mibolerone powder
Amanye amagama: Hlola amaconsi, i-Matenon, i-Mibolerone powder, Hlola i-Drops powder, i-CDB-904, i-3704-9-4
Ukusetyenziswa kweMibolerone powder
Injongo yale steroid kukuphazamisa umjikelezo wokuya esikhathini senjakazi ukuze inqanda ukukhulelwa. Njengamanye amahomoni e-steroid, kwaye oku kubandakanya ibanga lezilwanyana, kungekudala emva kokuqala kwayo ukuba abagijimi kunye nabakhi bomzimba bafumana ukusetyenziswa.
Hlola i-Drops enye yezonabolic steroids ezinamandla kakhulu ezenziwe. Kananjalo yenye yezona zinto zinkathazo ezithe zenziwa ngokubhekiselele kwimiphumo emibi. Oku akusiyo i-steroid esetyenziswa rhoqo ngama-bodybuilders okanye abadlali. Ngokuqhelekileyo uzakufumana ukusetyenziswa kwayo okulinganiselwe ukulwa ngaphambili okanye ukuncintisana kwamandla. Abanye abakhi bomzimba baya kuwusebenzisa phambi kokuncintisana ukuncedisa kwiiveki zokugqibela okanye kwixesha elide lokunyusa, kodwa akuyona into eqhelekileyo yokwakha umzimba. Siza kuqonda le ntsilelo ye-steroid yebheno kubaninzi bempahla njengoko siqhubeka.
Yiyiphi imilinganiselo yeMibolerone powder
Uninzi lwabagijimi basebenzisa ii-5mgs malunga ne-30min ngaphambi koqeqesho okanye ukhuphiswano. Akunjalo "ukuxhonywa" nantoni na ngaphandle kwekhadarine. Kuqhelekileyo kusetyenziswe nje phambi kweeseshoni zokuqeqeshwa ezibalulekileyo okanye ukhuphiswano. Abagijimi abaninzi sele besetyenzisiwe ukunyuka kwama-steroids bangezelele ekuhlaleni amaconsi njengendlela yokuvuselela kwangaphambili.
Hlola amaconsi athathwe ngomlomo kwaye kufuneka athathwe rhoqo. Amanani ngokuqhelekileyo awela kwi-200-300mcg ngosuku lwangosuku kodwa anganyuka kwi-500mcg ngosuku ngamanye amaxesha. Amanqanaba athathwe rhoqo phambi koqeqesho, malunga nemizuzu eyi-30-40 phambi koqeqesho, ukulwa okanye isiganeko. Akukho zidalwa zonyango ezicetyiswayo njengoko le steroid engazange isetyenziswe ngempilo ngenjongo yabantu.
Indlela i-Mibolerone powder isebenza ngayo
Hlola amaconsi ukulungiswa kwamanzi kwe-steroid iMibolerone powder (i-CAS 3704-9-4), eyasetyenziswa ngabakhi bomzimba, abaxhasi bamandla, abagijimi bamandla kunye nabaqhawe, konke ngenjongo yokwandisa ulwaphulo kunye nokusebenza ngosuku lokhuphiswano. Hlola amaconsi asebenzayo xa usebenzisa ii-30 imizuzu ngaphambi kokuncintisana. Umsebenzisi uya kuba nolwaphulo olwandisiweyo, ugxininiso kunye nomqhubi wokukhuphisana. Nangona le steroid ayiquki nayiphi na ivuselela ngokuthe ngqo, ibonisa isenzo esibonakalayo kwi-CNS (iNkqubo yeNervous Central) ngohlobo lwe-androgen olungaphezu kwe-overload. Le yeso sizathu kuphela esi sigqirha sisetyenziswe ngabadlali, njengoko iimali ze-muscle zingabonakaliyo nale nkunkuma.
Akukho bukho ubungqina bobuxoki okanye enye indlela abadlali abaye basebenzise Hlola amaconsi "umjikelezo" njengento eqhelekileyo kwezinye i-steroids. Kubonakala sengathi le steroid iqhube ibango eliqinileyo njenge-stroid yangaphambili yesiganeko sokwenza ukwanda komqhubi kunye nomqhubi wokhuphiswano. Nangona kunjalo, akukho ziphumo ezininzi kwiisistim zomzimba zingaphunyezwa kule nkunkuma ngenxa yeyona nto ingasetyenziselwa kwi-short-term 2 ngeeveki, kwii-5mg ezincinane. Naliphi na ixesha elingakumbi kulo, okanye idosi enzima, kunye nokukhathazeka kwezempilo kusondele.
Isaziso esibalulekileyo: Ukubuyiswa kwemvelo kungabikho umonakalo owenziwe kwi-Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis kwaye akuzange kubekho imeko ephantsi.
· Hepatotoxicity: Njengazo zonke i-C17-aa anabolic steroids Hlola i-Drops iyingozi kwi-isibindi. Isilinganiselo kunye nokubaluleka kobutyhefu ukusuka kwelinye iC17-aa steroid ukuya kwelinye elilandelayo lihluka kakhulu; ezinye ziyingozi kodwa zincinci, kodwa oku akunjalo. Hlola i-Drops ingaba enye yezona ziphumo ezinamandla, ezingathinteki kwi-enzyme zesibindi ze-C17-aa-steroids. Izindleko zesibindi ziya kwandisa ngokukhawuleza kwaye ezininzi ziza kufakwa kwisibindi.
Ukuba unesifo sesibindi akufanele usebenzise le steroid. Ukusetyenziswa kufuneka kugcinwe kuphela kwii-2-3 zeeveki ezininzi kwaye akufanele zisetyenziswe nayiphi na enye i-C17-aa steroid. Ngaphezu kwamachiza omncintiswano kufuneka agwenywe xa kunokwenzeka ukuba baninzi abanesibindi esichengeni kwaye oku kuya kubangela nje ukunyuka kwesibindi. Kwakhona kubalulekile ukuba umsebenzisi aphephe ukusetyenziswa kotywala ngexesha lokusetyenziswa kunye nokuxhaswa ngabahlambululi besibindi. Ukungaphumeleli ukwenza ezi zinto kunokubangela iingxaki zesibindi, kwaye kwabanye abasebenzisi uxinzelelo lunokuba lukhulu nangona ukwenza konke okulungileyo.
Ngaba i-Mibolerone powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Iimiphumo zecandelo lokujonga i-Drops zininzi. Le yenye yezonabolic steroids eziyingozi kakhulu ezenziwe. Ngenxa yokuba imiphumo emibi yokujonga i-Drops isomelele kakhulu akuyena umntu onokwenza i-steroid. Kukho iindlela ezininzi ezingcono. Ukwanda kobudlova kusithi ngaphambi kokuba ulwala lunokuba lunzima, kodwa iingozi ziza kubangela umvuzo ngale steroid. Oku akuthethi ukuba umntu uya kufa, kwaye kunokwenzeka ukuba iziphumo ezichaphazelekayo zokujonga i-Drops ziyakukhutshwa kwizinga (azikwazi ukuphetshwa ngokupheleleyo).
· I-Estrogenic: Imiphumo ye-Estrogenic okanye i-Check Drops inokwenzeka kakhulu njengoko le steroid ingumprogesin kwaye iyancipha kakhulu. Imiphumo emibi yokujonga i-Drops ingabandakanya i-gynecomastia, ukugcinwa kwamanzi kunye noxinzelelo oluphezulu lwegazi oluhambisana nokugcinwa kwamanzi. Nangona kunjalo, kuba ukusetyenziswa kusekufutshane kakhulu kwaye amaxabiso asetyenziswayo aphantsi (kuthatha kakhulu i-Mibolerone powder ukwandisa ubugwenxa) iziphumo ze-estrogenic azibonakali.
Ukusetyenziswa kwe-Aromatase Inhibitors (i-AI's) njenge-Anastrozole (Arimidex) inokukhusela kwimiphumo yecala ye-estrogenic yokujonga i-Drops. Oku kuya kunika ukhuselo kwi-estrogen kunye neprogesterone. Nangona kunjalo, umsebenzi we-estrogenic unamandla kangangokuba kunokwenzeka ukuba iingxaki zikhona kwamanye amadoda.
· Androgenic: Iziphumo zecala ze-androgenic zokujonga i-Drops zingabandakanya i-acne, ukukhula kweenwele zomzimba kunye nokulahleka kweenwele kumadoda afakwe kwi-baldness yamadoda. Imiphumo yecala ye-androgenic yokujonga i-Drops ingaquka kwakhona iimpawu zokuhlaziywa kwabasetyhini; Enyanisweni, ukuhlaziywa kwinqanaba elithile liqinisekisiwe.
· I-Cardiovascular: Imiphumo emibi ye-Check Drops ingabandakanya ezo zintliziyo ezinzima. Le steroid ingaba nzima kakhulu kwi-cholesterol kunye noxinzelelo lwegazi. Ingaba nefuthe elikhulu kwi-cholesterol ye-HDL (i-cholesterol enhle) kunye ne-LDL ye-cholesterol (i-cholesterol embi). Ukuba umntu unayo nayiphi na imeko ekhoyo ye-cardiovascular, ekhoyo okanye ekhoyo, akafanele ayisebenzise le steroid.
Abo ba se benzisa le steroid baya kufuna ukuqinisekisa ukuba baphila ubomi bomzimba obunobomi. Izidlo eziphilileyo ezityebi kwi-omega e-fatty acids kwaye eziphantsi kwamafutha apheleleyo kunye noshukela elula zibaluleke kakhulu. Umsebenzi oqhelekileyo we-cardiovascular uyenzekile, ngoko ke ukuba awukwazi ukuba yinxalenye yesimiso esi steroid akusiyo kuwe. Abasebenzisi kufuneka bancedise kunye ne-cholesterol antioxidant kwaye bagcine iso elifutshane kakhulu kwimpilo yabo ye-cardiovascular.
· Testosterone: Hlola i-Drops iyakunqanda ukuveliswa kwe testosterone yakho yemvelo kwaye iya kukwenza kakhulu. Ukusetyenziswa kwe-testosterone ephawulekayo kuyimfuneko ukuba imeko ephantsi ye testosterone igwenywe. Nangona ukusetyenziswa kudla ngokufutshane okukufutshane kunye nale steroid, ubude bokusetyenziswa abuyi kuphepha ukunyuswa kwe testosterone okubangelwa yi-steroid kwaye akukho mntu uza kuba nayo.
Xa ukusetyenziswa kwesi steroid sekuphelile kwaye zonke i-steroid ziye zacima inkqubo, ukuveliswa kwe testosterone yemvelo kuya kuqala kwakhona. Nangona kunjalo, i-Post Cycle Therapy (PCT) iyacetyiswa. Oku kuya kuphucula uphuculo; ayiyi kuqinisekisa kwaye ayiyi kuwugqiba, kodwa iya kuphucula imiphumo yokubuyisela kakuhle. Njengawo onke ama-steroids, kukho rhoqo umngcipheko wokufumana kwakhona, kwaye oku kufuneka kuqwalaselwe ngaphambi kokusetyenziswa.
Indlela yokuthenga i-Mibolerone powder esuka kwi-AASraw
Imibolerone powder Recipes: